Ganacsadaha | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Posts in category Ganacsadaha
Cabdiraxmaan Maxamed Aadan, September 29, 2020
Ganacsigu waxa uu muhiim u yahay adduunka iyo heer-nololeedka aadanaha, xiliyadii hore noloshu wey adkeyd sababtana waxey tahay macaamiisha ayaa iyaga ahaa kuwo sameysta waxey u bahanyihiin, mana aysan jirin kuwo wax walba awooda soo saaridiisa. Hadaba ganacsiga maanta waxa uu noqday mid hormaray oo illahay addoomadiisa u fududeeyey hababka kala duwan oo loo ganacsado. Ganacsiguna hadaba hadaan soo qaadano ‘Staub’iyo ‘Attner’ oo ah khuburada ku xeeldheer ganacsiga una dhashay Mareykanka ayaa igana ku qeexay ganacsiga sida tan ah. “Ganacsigu waa abaabul yoolkiisu yahay soo-saaridda badeeco iyo adeeg,si loo sameeyo macaash” Hadaba ujeedadeydu waxa weeye in maanta maadama ganacsigu balaarta, …
Ilhaan Ciise Maxamed, June 21, 2020
Cinwaankeenna haddii aan ku billowno weydiin; majeceshahay in aad maal qabeen noqoto? Haddii aad noqoto noloshee ayaad rabtaa in aad ku noolaato? Misida dadka caadiga ah ey unool yihiin mise sida boqorrada? Sidookale aan ku weydii sidee ayaad qorsheyneysaa in aad dadka ula dhaqanto marki aad lacag yeelato? Waan kaa raaligalinayaa haddii su’aalaha aan ku weydiyay aad kadareenta culeys ama dhibsi, sida in aad ku jawaabtay “Acuuddu billaah Allow ha’ii kasin in aan ku fitnooba lacagta” Aaamiin aamiin..dhammaanteen diyaar uma nihin in aan qalad sameynno, in aan dhib ku dhacno, in dadka nagu ag nool eyna dhibsadaan. Hadane waxaa jirta …
Cabdijabaar Sh. Axmed, February 7, 2016
Ganacsigu waa nidaam dhaqaalle oo meesha allaabta iyo adeegyadda wax lagu badelo mid kale ama lacag. Ganacsi kasta wuxuu u baahanyahay nooc ka mid ah maalgelinta iyo macaamiil ku filan in loo iibin karo si joogta ah si uu ugu caddeeyo faa’iidada. Ganacsiga wuxuu u kalla baxaa noocyo badan oo kala duwan sidda midka qaas ah (private) ama mid ay leedahay dawladda sidda kuwa aanay ka raadinin bulshada faa’iido (non-profit business). Ganacsiga noocaan oo kalle waxaa jiro qaar aysan dawladda ka raadinin lacago badan sidda korantada iyo biyaha oo kale. Waxaana ugu badan hay,adaha caafimaad oo ah gargaar u qaas …